Tsy hahavaha olana amin’ny fitsinjaran-karena ao Kazakhstan ny fanekena hijery ambany (hitsongoloka) indray · Global Voices teny Malagasy
Fialana bala fotsiny ny Tahirim-bola vaovaon'i Kazakhstan ho an'ny Vahoaka
Voadika ny 07 Febroary 2022 5:58 GMT
Mpanao fihetsiketsehana milamina tao amin'ny Kianjan'ny Repoblikan'i Almaty tamin'ny 6 Janoary. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube Radio Free Europe/Radio Liberty.
Nifarana tamin'ny herinandro lasa teo ny hetsika ady amin'ny fampihorohoroana nataon'ny governemanta tao Kazakhstan, satria nanome tsiny ny vondrona vahiny 20.000 ny mpitarika ny firenena noho ny fifandonana mahery vaika izay nitarika fahafatesana olona maherin'ny 200 tany Almaty, tanàna lehibe indrindra sy renivohitra taloha, ary am-polony hafa tany amin’ny tanàna hafa.
Nametraka fiampangana amin'ny tsy fahaiza-manao sy famadihana ny fitaovam-piarovana azy ny filoha Kassym-Jomart Tokayev. Noresahiny ihany koa ny olana fototra nanosika ny fihetsiketsehana voalohany niparitaka nanerana ny firenena: dia ny tsy fitoviana.
Raha nametraka drafitra vaovao ho fanavaozana i Tokayev nandritra ny iray tamin'ireo lahateny maro nataony tamin'ny volana Janoary, dia nanambara ny fananganana ny Kazakhstan Khalkyna (Kazakhstan ho an'ny vahoaka), famatsiam-bolam-panjakana izay tokony handraisan'ny orinasa lehibe indrindra sy ny mpandraharaha anjara— an-tsitrapo — ho fanehoana fanohanana ny servisy sosialy. Hanampy amin'ny tetikasa famatsiam-bola ny “fikarakarana ara-pahasalamana, fanabeazana, fanohanana ara-tsosialy”, ny famatsiam-bola araka ny nolazain'ny fampitam-baovao iray.
[Ny Tahirim-bola] ho hisarika tolo-tanana avy amin'ireo fikambanana mpanao asa soa iraisam-pirenena [ary koa] fandraisana anjara tsy maintsy ataon'ireo mpandraharahan'ny loka sy ny loteria. Mazava ho azy, manantitrantitra aho fa manantena fandraisana anjara lehibe tsy tapaka amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny orinasa lehibe.
Mametraka ny andraikitry ny sehatra tsy miankina mba hanome an-tsitrapo ny ampahany amin'ny tombom-barotra azony ho fepetra fitsinjarana indray ny fanavahana ny famatsiam-bola avy amin'ny tetibolam-panjakana sy ny fanantenana fandraisana anjara betsaka avy amin'ny orinasa lehibe.
Mifanaraka amin’ny fomba mitsongoloka mahazatra fanaon'ny fitondram-panjakana manoloana ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny lafiny “asa soa” amin'ny famatsiam-bola.
Raha topaza-maso, napetraka tamin'ny Jolay 2019, iray volana taorian'ny fifidianana an'i Tokayev, tamin'ny alàlan'ny fananganana ny vaomieram-pirenenan'ny Fitokisam-bahoaka, ny vahaolana mitsongoloka amin'ny olam-piarahamonina, natao ho seha-bahoaka hiresahana sy hanolorana vahaolana ho an'ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny firenena. Milaza ny ankamaroan'ny mpanara-maso fa tsy nahavita ny asany ny filankevitra.
Mitovy amin'ny filankevitra, mampiseho “biraompanaraha-maso manam-pahefana misaraka” izay tokony hitazona ny tsy fiankinany amin'ny governemanta ny famatsiam-bola. Na izany aza, efa akaiky na mbola akaiky ny mpitondra ny firenena ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny antony sy ny fiantraikan'ny famatsiam-bola, nanatona an'i Maurizio Totaro, kandidà PhD ao amin'ny Oniversiten'i Gent, izay nifantoka tamin'ny fikarohana nataony tamin'ny faritra Mangistau, ny tantarany, ny tahala ary ny vahoaka ny Global Voices.
Global Voices: Mifanaraka amin'ny drafitr'i Tokayev momba ny “de-oligarchization (fanafoanana ireo mpanefoefo) ” ve ny fananganana ilay famatsiam-bola? Ary iza no mahazo tombony amin’izany?
Maurizio Totaro: Fepetra voalohany tsy misy famoretana ho setrin'ny fihetsiketsehana an-dalambe ao amin'ny firenena ny fananganana ny famatsiam-bola. Fiezahana hanaraka ny antson'i Tokayev amin'ny fanafoanana mpanefoefo ao amin'ny firenena izany. Raha mamakafaka ny lahatenin'i Tokayev manontolo anefa isika, dia hita fa tsy fepetra fitsinjaran-karena izany fa asa fanasoavana. Ny famatsiam-bola dia fomba iray ho an'ny vondrona sangany sasany izay nahazo tombontsoa tamin'ny rafitra Nazarbayev hanehoana ny fandraisany anjara amin'ny fiarahamonina. Natsangana tamin'ny fomba an-tsitrapo, tsy manery ny orinasa sy ny olon-tsotra handray anjara ny famatsiam-bola
GV: Noho izany dia fomba iray hanolorana fanomezana ho takalon'ny laza tsaratsara kokoa izany?
MT : Fomba iray hampifandanjana ny fanakianana momba ny maha ara-panjakana sy ny maha ara-dalàna ny harena nangonin’ireo vondrona ireo ihany koa ny famatsiam-bola. Amin'ny fanaovana izany ho fandraisana anjara amin'ny asa soa, lasa fomba iray ahafahan'ny orinasa mahazo (karazam-pahamendrehana) ao anatin'ny rafitra ny fanomezan'ny orinasa iray ho an'ny famatsiam-bola. Amin'izany fomba izany, manome ara-dalàna ny andraikiny amin'ny “lalao vaovao” izay lazain'i Tokayev fa natombony ireo mpanefoefo sy ny orinasa lehibe.
GV: Nandritra ny lahateniny, nanome toky ny vahoaka ihany koa i Tokayev fa tsy hanakana ny foto-kevitry ny toekaren'ny tsena ity famatsiam-bola io. Nahoana izany no endrika manan-danja nosoritana?
MT: Nolazain'i Tokayev mazava tsara ihany koa fa tsy hetra izany — ka dia hampisy fiantraikany tombontsoa niala hetra an'ireo mandray anjara. Ary ny fanoritany ny foto-kevitry ny fananan'olon-tsotra ihany koa no mametraka fetra hanoherana ireo antso vao haingana avy amin'ny mpiasa mba hahatonga ireo orinasa fitrandrahana sasany ho alain'ny fanjakana. Ireo fanambaràna tsotra roa ireo no miantoka ny toetry ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola avy any ivelany.
Raha fintinina ny famakafakany, dia nilaza tamin'ny Global Voices i Totaro fa “toy ny fanazaran-tena amin'ny setroka sy ny fitaratra ilay famatsiam-bola, fepetra tsy ampy mihitsy hiatrehana ny hantsana ara-drafitra izay nampiakatra ny fihetsiketsehana tamin'ny volana Janoary”.